Wararka - Falanqaynta suuqa ee dhalooyinka quraaradaha ah
Astaamaha ugu waaweyn ee weelasha baakadaha dhaladawaa: non-sun ah, Faylasha, Transparent, qurux badan, caqabad wanaagsan, hawadu, qalabka hodan ah iyo cayriin, qiimaha yar yahay, iyo in la si joogta ah loo isticmaali karaa. Waxay leedahay faa'iidooyinka iska caabinta kuleylka, caabbinta cadaadiska iyo iska caabinta nadiifinta. Waxaa lagu nadiifin karaa heerkulka sare laguna kaydin karaa heerkulkiisu hooseeyo. Faa'iidooyin badan awgood, waxay noqotay sheyga baakadaha la doorbido ee khamriga, shaaha miraha, jujube juuska iyo cabitaanno kale oo badan. Waxyaalaha muraayadaha ayaa laga sameeyaa muraayad jaban, ash ash, sodium nitrate, barium carbonate, ciid quartz iyo in ka badan toban nooc oo ceyriin ah. Waxay ka samaysan yihiin by barafku iyo qaabeynta ee 1600 ℃.
Dhalooyinka quraaradaha ah qaabab kala duwan ayaa loo soo saari karaa iyada oo loo eegayo caaryaal kala duwan, inta badan oo ay ku jiraan dhalooyinka khamriga ee kala duwan, dhalooyinka sharaabka, dhalooyinka qajaarka, dhalooyinka malab, dhalooyinka madaxa, dhalooyinka biyaha, dhalooyinka cabitaanka kaarboonka, dhalooyinka kafeega, koobabka shaaha, 0.5kg / 2.5kg / 4kg dhalooyinka khamri, iwm ,. Dhalada dhalada ah waa mid hawo leh oo hufan, waxayna hayn kartaa badeecada oo aad ugu nugul huurka muddo dheer.
Maaddaama ay tahay geedi socodka wax soo saarka galaaska kala duwan, ku dhowaad dhammaan alaabada dhalooyinka ayaa soo saari doona qaddar gogo 'ah oo muraayad jabay ah oo ku saabsan geeddi-soo-saarka iyo farsamaynta. Muraayadda fidsan ee warshadaha qalabka dhismaha waa sahlan tahay in dib loo warshadeeyo sababtoo ah wax soo saarkeeda ballaaran iyo hal shey. Heerka dib-u-warshadaynta hadda waa mid aad u sarreeya. Si kastaba ha ahaatee, wax soo saarka galaas iyo waxyaabaha galaasyada in industry iftiinka leeyihiin qaabab kala duwan iyo wax soo saarka yar yahay, sidaa darteed habka dib u warshadaynta waa mid yara adag. galaas jebiyey waa hodan ku nijaasta soo bandhigay geedi socodka barafku ee galaaska, sidaa daraadeed waxa uu saamayn ku yeelan kara waxqabadka galaas laftiisa.